Dib u dhac ku yimid shirkii ka furmayey Garoowe | KEYDMEDIA ONLINE
Dib u dhac ku yimid shirkii ka furmayey Garoowe
Shirkan ayaa ah mid ay isugu tageen muxaafid iyo mucaarad
Dib u dhac ayaa ku yimid Shirkii Madasha aragti wadaaga ee Machadka Hiretage, kaas oo galabta lagu waday in uu ka furmo magaalada Garoowe.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah Agaasimaha machadka Heritage ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta keentay dib u dhaca furitaanka shirkan.
Waxa uu sheegay Agaasimaha in sababta ugu weyn ay tahay in uu ku yaraaday howlkii lagu qaban lahaa shirka, maadaama ay buux dhaafiyeen kaso qeybgalayaasha, sidaasi darteedna madaxweyne Dani uu ku taliyey in beri shirkan la furo, iyadoo howl weyn lagu qaban doono.
Sidoo kale agaasime C/rashiid ayaa xaqiijiyey in shirkan uu berri ka furmi doono jaamacadda PSU, wuxuuna socon doonaa Saddex cisho, iyado ay ka qeybgali doonaan mas'uuliyiin isugu jira mucaarad iyo muxaafid.
Shirkan ayaa lagu qaban jiray dalka Jabuuti, waana markii ugu horreysay oo lagu qabanayo magaalada Garoowe, iyadoo arrimo badan oo ku saabsan dalka looga hadli doono sida dib u eegista dastuurka, ammaanka, doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim ah.